Mapuratifomu edhijitari emari: ndeapi uye anoshanda sei? | Ehupfumi Zvemari
Mapuratifomu edhijitari emari: ndeapi uye anoshanda sei?
Mumakore achangopfuura, madigital emari mapuratifomu ave mufashoni senzira dzekuvandudza mari. Asi hazvisi zve kwakajairika mashandiro, asi kuburikidza nenhevedzano yezvigadzirwa zvinoenderana nezvikwereti zvinounza njodzi huru mukushanda. Ndokunge, iwe kwaunogona kuwana mari yakawanda mune pfupi nzvimbo yenguva, asi zvakare siya rinenge rese guta guru munzira. Ndokusaka kungwara kuchizove chinowanzoitika mune zvese zviito zvevashambadzi vanosarudza idzi dzakasarudzika mari.
CFDs zviridzwa zvakaoma uye zvine njodzi huru yekurasikirwa nemari nekukurumidza nekuda kwekuwedzera. 66.77% yevatengesi vevatengesi maakaunzi anorasikirwa nemari pakutengesa maCFD. Iwe unofanirwa kufunga kana iwe uchinzwisisa mashandiro eCFD Uye kana uchikwanisa kutora mukana wakakura wekurasikirwa nemari yako. Kopa masevhisi ekutsinhana anotakura dzimwe njodzi kune yako mari nekuda kwechimiro chezvigadzirwa zvakadaro. Kana njodzi dziripo dzisingaite senge dzakajeka kwauri, zvichave zvirinani kusiya iyi imwe hasha yekudyara.
Iyi kirasi yezvigadzirwa zvemari yakagadziriswa nezvirongwa zviviri zvekuita. Kune rimwe divi, kugutsa zvirinyore-zvenguva pfupi kudyara zvakagadzirirwa avo varimi varikutsvaga imwe nzira yekukurumidza yekuzadzisa zvinangwa zvavo uye vasina mumwe kunze kweku kurumidza kuzadzisa mari inowanikwa mukufamba kwavo mumisika yemari. Uye kune rimwe divi, kuburikidza nemapuratifomu evanyanzvi mumisika yemari. Iko kupi mupiro wavo mukuru uripo pakuti ivo vanogona kubatsira kuteedzera mashandisiro uye kudzora zvizere njodzi dzese dzinogona kuitika.
1 Dhijitari mapuratifomu: kusaina kumusoro
2 Ita mari
3 Vashandi vekudyara vanovimbisa
4 Zvirongwa zvebhonasi
5 Matipi ekuvaka kuvimbika muzvirongwa izvi
6 Otomatiki ekudzora system
Dhijitari mapuratifomu: kusaina kumusoro
Kutanga kutengesa mumusika wekuchinjana kune dzimwe nyika kana zvimwe zvinhu zvemari, zvinodikanwa kunyoresa munzvimbo yenhengo uye kuvhura account yekutengesa. Zve vanotanga vatengesi, iyo inonzi demo account inowanikwa. Izvi zvinorevei? Zvakanaka, zvakapusa, nzira yekudzidza seye investor asi nemari chaiyo pasina chero njodzi yekurasikirwa nemari chaiyo. Iwe haufanire kuita chero yakakosha mari kudyara.
Nhanho inotevera ndeyekuodha pasi nekuisa chikuva chekutengesa. Kuti utengese uye utengese mari kana zvimwe zvigadzirwa zvemari, unofanirwa kurodha papuratifomu iyi uye kuiisa pakombuta yako kana zvimwe Technological mudziyo mumaminetsi mashoma kuti utange kushanda mumusika wakasarudzika wemari. Chero zvazvingaitika, kuti ikubatsire kudzidza kufungidzira mafambiro emari mbiri, aya mapuratifomu edhijitari anopa hupfumi hwezvidzidzo uye zvekushandisa zvinhu.
Chimwe chikamu mune ino yekudyara maitiro inoitwa kuburikidza neicho chaicho mashandiro emari. Mupfungwa iyi, kuti utange kutengesa nemari chaiyo, unofanirwa kuisa yako account yekutengesa. Izvo zvinogona kuitwa muchikamu chinonzi as Deposit kana Kurega, zvinoenderana nezvichave kufamba kwevashandisi mukati medunhu renhengo. Iwe unogona kuisa account yako yekutengesa uchishandisa chero iripo yekubhadhara system, iri nyore kwazvo kwauri. Iko kunonyatso kuzivikanwa kunowanikwa, kubva ku bank transfers kusvika pakushandisa kiredhiti kana makadhi ekubhengi.
Nhanho inotevera yakavakirwa pakuita transaction padhijitari chikuva. Kwokuvhura odha nyowani, iwe unofanirwa taura vhoriyamu (Zvinokurudzirwa kutanga nehuremu hwe0.01) uye wosarudza pakati pekutengesa nekutenga. Mushure meichi chiitiko, odha yako yakavhurika, zvinoreva kuti watanga kutengeserana mumusika wakasarudzika uye kuti zvinogona kunge zviri zvimwe zvezvakawanda zvakaitwa nevashandisi vemari. Iko, mumwedzi ichangopfuura, imwe senge itsva senge iyo yakabatana nemari chaiyo yakaverengerwa, uko bitcoin iriko.
Vashandi vekudyara vanovimbisa
Aya mapuratifomu akasarudzika, kazhinji, inhengo dzeInvestment Compensation Fund yeimwe nyika isingakoshe. Chinangwa chehomwe iyi ndechekupa vatengi veinishuwarenzi emakambani akanyoreswa nemari yekubhadhara kana makambani asingakwanise kuabhadhara vega. Mune zviitiko izvi, muripo unogona kuwanda kusvika ku20.000 euros.
Iwo mashoma ekutanga dhipoziti huwandu hweakaundi hwakagadzirwa nedhijitari yekudyara mapuratifomu i100 USD / 100 EUR / 100 GBP (kana yakaenzana mune chero imwe mari) Iyo dhipoziti dhipoziti kune akakosha maakaunzi iri 5,000 USD. Iko hakuna kuganhurirwa kune anotevera madipoziti. Nekudaro, zvakafanira kuzivisa kuti njodzi yemabasa aya yakanyanya uye nekudaro hazvikurudzirwe kuita mafambiro akakura nekuti chikamu chakanaka chemari yakachengetwa chinogona kurasikirwa.
Chimwe chinhu chinofanirwa kuratidzwa kubva zvino zvichienda mberi ndechekuti iri ishumiro ine yakasarudzika bhalanzi dziviriro muaccount. Izvi mukuita zvinoreva kuti kubva panguva ino chaiyo, vese vashoma uye vepakati varimimari vanovimbiswa pamwe nekuchengetedzwa kweiyo yakaipa chiyero. Mupfungwa iyi, kudzivirirwa pachiyero kwakashata kunovimbisa kuti muzvinashawo haakwanise kurasikirwa nemari yakawanda iyo yaunayo muakaunti yako. Hazvishamisi kuti iri mushure meimwe yenjodzi huru dzeaya mashandiro. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga uye kunyangwe kubva poindi rezvinyorwa zvaro zvemukati.
Kune rimwe divi, aya madigital ekudyara mapuratifomu akaisa chirongwa chechisungo kuita kuti mashandiro mumidziyo yezvemari inogoneswa mune imwe neimwe kesi ive nerubatsiro. Kunyanya, ivo vanowanzo kupa vatengi vavo zvakanakisa zvekushambadzira zvinopihwa pamisika yezvemari: classic voucher, nhaurirano inotaurirana kana mari kudzoserwa. Nezve zvirevo zvinotakura zvidzikiso zvinosvika gumi muzana pa account account. Nepo pane zvinopesana, zvimwe zvinoitirwa zvakanakisa
Matipi ekuvaka kuvimbika muzvirongwa izvi
Kune akateedzana ekurudziro kuitira kuti vashoma uye vepakati varimari vagone kukwidziridza kufamba kwavo mune yakasarudzwa mari midziyo uye iyo inopfuurira kuburikidza nekuteerera kune mamwe emazano atinokufumura iwe pazasi:
Pasi pechirongwa, mutengi ane mukana weku bvisa mari kubva kunhengo yenhengo yako kaviri pamwedzi pasina kubhadhara makomisheni.
Mutengi anogona kutora mukana pachirongwa paChipiri chekutanga uye chechitatu chemwedzi wega wega, zuva rese.
Pamazuva evhiki ataurwa pamusoro, mutengi anogona kubvisa mari pasina kutumwa kuburikidza chero ipi yekubhadhara system inowanikwa kamwe chete pazuva.
Kuti ubatsirwe nechipo ichi, mutengi anofanira kuisa account yavo yekutengesa kanokwana kamwe mukati memwedzi mitanhatu yapfuura.
Sarudzo ye kusununguka kusununguka yeakabatana komisheni ishoma.
Kune rimwe divi, ivo vanofungisisa mamwe mapurogiramu ayo vashandisi vanogona kubatsirwa nemamiriro ekubvumirana avanopa. Semuenzaniso, nemabasa akaenzana uye margin muzana (pa50% yeiyo shoma inodiwa margin) umo mupi anodikanwa kuti avhare imwe kana dzinopfuura nzvimbo dzayo dzakavhurika dzeCFDs kana zvimwe zvigadzirwa zvine maitiro akafanana.
Otomatiki ekudzora system
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti otomatiki mari yekubvisa sisitimu sevhisi yekugadzirisa otomatiki mari yekubvisa zvikumbiro inobvumidza kudzikisira chinja nguva yemari inosvika padiki semineti imwe. Zvikumbiro hazvichashandiswi chete panguva yekambani maawa, asiwo husiku, pakupera kwevhiki kana kunyangwe pazororo.
Iyo muzana yezvikumbiro yakagadziriswa otomatiki inokura zvishoma. Panguva ino, 85% yezvikumbiro zvevatengi inogadziriswa nenzira inozvifambisa. Iko iko nguva yekugadzirisa kunyorera iri pasi peminiti imwe. Mune imwe tsinga, kubviswa kwemari kune zvikamu zviviri: kurapwa kwechikumbiro chekubvisa uye kuitwa kwechikumbiro. Kushandisa maitiro aya zvinoshamisa kunomhanyisa kumhanya kwekutora mari.
System mashandiro aripo
Iyi sisitimu inoshanda maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki. Vese vatengi vanogona kutora mari yavo chero nguva, kunyangwe husiku, pakupera kwevhiki kana pazororo reruzhinji.
Iyo yekubvisa system zviri nyore uye zvakasikwa. Uye iyi otomatiki nzira yekubvisa inowanikwa mumhando dzese dzeacount chaicho umo madhipatimendi anoitwa uchishandisa chero eanotevera masisitimu ekubhadhara: Skrill (Moneybookers), FasaPay, NETELLER. Iwe unongofanirwa kutora chikumbiro chekubvisa kubva kunhengo dzako nzvimbo.
Nezve kumwe kuita, iyo inoitirwa kuendesa mari pakati pekambani yavo yekutengesa pane akasiyana madhijitari ekudyara mapuratifomu anomira. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwe unogona kuendesa mari kubva kuaccount, iyo yakaiswa kuburikidza nekadhi rebhangi, pasati papfuura mazuva makumi matatu mushure mezuva rekupiwa. Kuti upedze iyo yemukati yekuchinjisa: yako account password, iyo huwandu kuti iendeswe uye iyo yekuenda account account.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mapuratifomu edhijitari emari: ndeapi uye anoshanda sei?
Makiyi mashanu anoburitswa kubva muhuwandu hwekutengesa